Maitiro Ekutarisa Ekutumira Nguva Uye Kutumira Mari paCJ - Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Maitiro Ekutarisa Ekutumira Nguva Uye Kutumira Mari paCJ
Tumira zuva 03 / 11 / 2020
Kutumira nguva uye mutengo wekutumira ndiyo inonyanya kunetsa musoro pakati pevanodonhedza. CJ's kutumira mutengo kuverenga chishandiso chinokuratidza sarudzo dziripo dzekutakura, inofungidzirwa nguva yekuendesa uye mutengo wekutumira nekungobaya mashoma.
1. Nzira Nhatu dzekuwana Iyo Yekutumira Mari Yekuverenga Chishandiso.
2. Zadza Ruzivo Runodikanwa rweKutumira Mari Kuverenga.
3. Oversize Zvigadzirwa 'Kutumira Kuverenga.
Pane zvirevo zvako.
1.Nzira Nhatu dzekuwana Iyo Yekutumira Mari Yekuverenga Chishandiso
Maitiro A: Kona yekurudyi yekumusoro pane peji reimba, iwe unowana yako Nhoroondo; Enda ku turusi- kutumira mutengo kuverenga.
Maitiro B: Kona yekurudyi yekumusoro peji rekutanga, uchawana "Our Services”Nekorona diki. Dzvanya icon, wobva wasarudza yechina sarudzo- "Shipping. ” Ipapo icharatidza iyo nguva yekutumira nemutengo sarudzo. Dzvanya.
Maitiro C: Bhura pasi pasi peji rekutanga. Iwe uchawana chikamu chekutevera pasuru mushure mechikamu chakakurudzirwa zvigadzirwa. Dzvanya iyo mari yekutumira uye nguva.
Dzese nzira nhatu dzataurwa pamusoro dzichasvetukira kune yekuendesa mutengo wekuverenga peji.
2. Zadza Ruzivo Rwakakodzera rweKutumira Mari Kuverenga
Pa kutumira mutengo kuverenga peji, iwe uchafanirwa kusarudza yako chikuva, chakatumirwa kubva, nyika yekuenda, hunhu hwechigadzirwa uye huremu kuitira kugadzirisa. Wobva wadzvanya kuverenga. Icharatidza ese aripo ekutumira sarudzo pamwe neanofungidzirwa kutakura nguva uye mutengo. Ongorora: hunhu hwakasiyana hunokanganisa sarudzo dziripo dzekutakura. Iyo inofungidzirwa nguva yekuendesa mune Calculator haisanganisiri yekugadzirisa nguva. Unogona kureva nguva yekugadzirisa inoratidzwa pane peji yechigadzirwa.
3. Oversize Zvigadzirwa 'Kutumira Kuverenga
Kana hunhu hwechigadzirwa hwanyanya, ndapota ita shuwa yekusarudza iyo oversize sarudzo. Iwe unofanirwa kupinda muchigadzirwa kureba, upamhi uye kukwirira uye nerumwe ruzivo rwunoda, wobva wadzvanya kuverenga. Icharatidza sarudzo dziripo dzekutakura nemitengo yekuwedzeredza uye nguva dzinofungidzirwa dzekutumira. Ongorora: Unogona kutarisa kune chigadzirwa chigadzirwa chinoratidzwa pane peji yechigadzirwa.
Izvo zvese ndezve maitiro ekutarisa nguva yekutumira uye mari yekutumira paCJ. Kana iwe uine chero mibvunzo, inzwa wakasununguka ku taura nesu.
1 awa kare
vatengesi vakaratidza kuti vari kufamba paFacebook izvozvi👇👇👇
Zvakanakisa gumi Zvakaratidzwa Kudonhedza Zvigadzirwa zveKukadzi 10 | Trending Products on
Tags aftership, cj kudonhedza, cjdropship, cjdropshipping, cjdropshipping ongororo, cjdropshipping shopify, cjpacket, dropshipping, epacket, kutumirwa kwekutevera, kutumira mutengo kuverenga, mari yekutumira, shopify
← TikTok uye Shopify Kudyidzana | Maitiro Ekutsvaga Ekukunda Zvigadzirwa paTikTok → Kugamuchirwa kuCJ POD